abakosem ne nnipa ewo ekuo no mu
Nwuma a SANN ye
Sen na wobehu SANN
Nnwuma a yeye no seisei
- ekwan a yebefaso ama oman Ghana aye ahaban mono-mman bio no ye Aban nhyehyee. Timba twa ne nsaase a yehyehye no basabasa no ama Ghana adane esre ne sa…Afe 2006 no mu, bosome a etƆso edu no Ghana Aban hyehyee se oman no mu nipa akuo kuo nndua nnua ahoro bebree. SANN duaa nndua 50. Ye duaa nnua bi te se oframo, teek, mme, kyenkyen, akasia. Afe yi 2007 ), yadua nndua ahanu aduonum(250) wƆ bosome enum no mu.
Yennpe ntontom ne yadee »malaria »
eda 6.03.07 a oman Ghana nyaa mfie aduonum Fawohodi no, SANN boo dawuro se yennpe ntontom ne “malaria” wo Sawua-Aboaso! Efiri saa bere no, ye koso bo dawuro kyerekyere akwan a yebefaso apam ntontom na yatu saa yadee “malaria” yi ase afiri Sawua-Aboaso: biibi te se yebeda ntontom dan mu, yebesisi ammena a ededa mfikyire na yadodo nnwura a atwa kuro no ho ahyia. Yebekyerekyere nipa no nso ekwan a yenam so ko “malaria” yadee no.
SANN hyee dawubo fa yadebo HIV/AIDS ho afe 1990 no mu. Efiri saa bere no, yetaa ye nkyerekyere wo yadee no ho ma akyerekyerefoo ne asukuufoo. Afe 2004, bosome a eto so nsia no mu JSS sukuufoo dummienu (12) bi yee adesua fa HIV/AIDS yadee no ho wo Okomfo Anokye Ayaresabea. Saa adesua yi aboa ma HIV/AIDS dwumadie wo Sawua-Aboaso agyina. Sukuufoo dummienu yi biara duaa dua baako de kae nipa a yadebone yi aku won anaa aye won. Owura a Ɔda SANN ano no ne AIDS akuo ahoro aye adwuma mmere tenten wo Gyaaman oman mu. Ghana ha nso, SANN ne ekuo kesee “Ghana Aids Commission” taa di nkitaho.
SANN nkosou nnwumadie no, de mpaninfoo adesua na ehyee asee. Efiri saa bere no, ekwan a yebefaso anya nimdee foforo aye nkosonnwuma ne yen botaee titriw.
Mpaninfoo sua atwere ne akenkan. Wosan sua nimdee fa won nnwuma ho.
Yedwendwen nneema a eha won a won annko sukuu. Oyi boa ma wohunu Sukuu ho mfasoo na wode won nkwadaa ko sukuu.Ahenfo,Kometiifoo ne Asembreman a won wo Sawua-Aboaso taa hyiahyia nipa no ne wo dwendwen nsem a eha won ho.
Mmrantee ne Mmabaa Senta
Yebuee SANN Mmrantee ne Mmabaa Senta no afe yi, bosome nnwotwe, eda a etoso enum (5.08.07). Senta no wo baabi a yebo bool, “table tennis” ene “basket ball” Yasiesie edan kesee baako mu a mmrantee ne mmabaa hyia dwendwen won ho. SANN ama won komputa mmiensa, afidie a yede twere mmienu ena afidie a yedepam adee nso baako. Nkrataa a yefem (library) ene agoro-ludo, dame, ne dee ekeka ho pii wo edan no mu. Yewo mmarimowaa ne maayiwa a odeda nnwuma no ano.